Ciidamada dowladda oo soo bandhigay Sarkaal 11 sano Al-Shabaab ka tirsanaa oo ka soo goostay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada dowladda oo soo bandhigay Sarkaal 11 sano Al-Shabaab ka tirsanaa oo...
Ciidamada dowladda oo soo bandhigay Sarkaal 11 sano Al-Shabaab ka tirsanaa oo ka soo goostay
Xudur (Halqaran.com) – Saraakiisha Ciidamada Militariga dowladda Federalka Soomaaliya ee Gobolka Bakool, ayaa isku soo dhiibay Sarkaal muddo fog ka tirsanaa Al-Shabaab, kaasi oo lagu soo bandhigay Degmad Xudur ee Gobolkaasi.
Sarkaalkaan ayaa la sheegay muddo 11 sano ah inuu la shaqeynaayay Al-Shabaab, islamarkaana uu ka hawlgalay deegaano badan oo ka tirsan Gobolka Bakool.
Waxaa magaciisa Colaad Cabdrixmaan Xerow, waxaana uu ahaa darawal in muddo ah kaxeyn jiray gaadiidka dagaalka ee Al-Shabaab.
Colaad ayaa ka dalbaday shacabka Soomaaliyeed inay iska cafiyaan, maadaama muddo dheer Al-Shabaab uu ahaa, islamarkaana uu door ka qaatay dhibaateynta shacabka Soomaaliyed.
Guddoomiye ku xigeenka dhanka amniga ee Degmada Xudur, Ibraahim Isaaq Ibarahim oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ninkaan uu xiriir la soo sameeyey ciidamada, kadibna uu isku soo dhiibay, sidaasina ay ku soo dhoweeyeen ciidamada dowladda.
Waxaa jirtay muddooyinkii dambe Saraakiil kala duwan oo Al-Shabaab ka tirsan, kuwaasi oo garawsanaayay inay isaga soo baxaan Ururkaasi.
Ciidamada dowladda oo bandhigay sarkaal ka soo goostay Al Shabaab
muddo 11 sano Shabaab ahaa